SAWIRRO: ”Halkan baan fadhinnaa waana idiin jeednaa” – Taageerayaasha Curva Sud oo walaacooda u muujiyay maamulka Milan. – Gool FM
SAWIRRO: ”Halkan baan fadhinnaa waana idiin jeednaa” – Taageerayaasha Curva Sud oo walaacooda u muujiyay maamulka Milan.
Raage March 5, 2017
(Milano) 05 Maarso 2017 – Kooxda AC Milan ayaa muddo 3 sano ka badan waxay miiska u saaran tahay in la iibsado, iyadoo markii hore uu yimid nin Thailand u dhashay oo la yiraahdo Mr Bee, kaddibna waxaa bedeley dallad Maraykan ah oo uu hoggaaminayay Micheal Gancikoff, taasoo qoray isu dhiibkii farta ka saartay dallad Chinese ah oo uu hoggaaminayo Mr Li.
Yeelkeede, dalladdan oo heshiis hordhac ah 5-tii Agoosto ee sanadkii tegey la saxeexatay Fininvest – sharikadda gacanta ku haysa Milan – ayaa markii 3-aad ku guul darraysatay inay si rasmi ah u iibsato kooxda AC Milan, iyadoo uu xalay Silvio Berlusconi sheegay inaysan jirin wax laga werwero oo ay dalladda SES codsatay in waqti gaaban loogu kordhiyo ballantii hore oo dhacday 3-dii bishan.
Yeelkeede, taageerayaasha AC Milan, gaar ahaan kuwa Curva Sud oo xalay daawanayay kulankii ay kooxdoodu 3-1 uga badisay Chievo ayaa codkooda maqashiiyay maamulka Milan, iyagoo muujiyay walaaca ay ka qaadeen hubaal la’aanta dul hoganaysa kooxda Rossonerri, waxayna soo bandhigeen baanar ay ku qoran tahay: “Halkan baannu joognaa … waana idin eegaynaa”.
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Liverpool guusha ka gaartay Arsenal ee Premier League
GOOGOOSKA: Atalanta vs Fiorentina 1-1 (Xawaarihii Atalanta oo la xakameeyay)